कण्डमले बनाउछ महिलाहरुलाई बढी सेक्सी ! | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
कण्डमले बनाउछ महिलाहरुलाई बढी सेक्सी !
Posted on मार्च 5, 2010 by toyadahal	कण्डमको उपयोग गर्नाले महिलाहरुलाई बढी सेक्सी बनाउछ र महिलाहरुबाट पुरुषहरु आकर्षित हुन्छन् । यो त्यस विज्ञापनका केहि हरफहरु हुन जुन आजभोलि बि्रटेनमा युवाहरुका लागि प्रचारमा ल्याईएको छ । यस विज्ञापनको उद्देश्य युवाहरुमा सुरक्षित यौन प्रवृत्ति विकशित गर्नु हो ।
बि्रटेनको स्वास्थ्य मन्त्रालयव्दारा चलाईएको यस कार्यक्रममा बताईएको छकि युवतीहरुले हरबखत आफ्नो पस्रमा कण्डम राख्नु पर्छ । पुरुषपनि यस्ता युवतीहरुप्रति बढी आकर्षित हुन्छन जस्ले हरबखत आफुसंग कण्डम या गर्भनिरोधक चक्की कन्ट्रासेप्टिव राख्छन् ।
युवाहरुका लागि काम गरिरहेका केहि सामाजिक संस्थाहरुले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस कार्यक्रमको तिब्र बिरोध गरेका छन् । यसका बाबजूत सरकार भने ुवाहरुलाई पे्ररित गरिरहेको छ कि आफ्नो पार्टनरका साथ सुखद जीवन बिताउनका लागि यी बस्तुहरु गर्भनिरोधक को आत्मविश्वासका साथ प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कण्डम बढाउछ सेक्स अपील
सरकारले यस अभियानको नाम दिएको छ कण्डम कन्फिडेन्स बूस्ट सेक्स अपील अर्थात आत्मविश्वासका साथ कण्डमको प्रयोग गर्नाऌ सेक्स अपीलको काम गर्छ । यसमा बताइएको छ कि पुरुष तिनै महिलाहरुलाई मन पार्छन जस्ले यो राम्ररी जाने बुझेका हुन्छनकि पुरुषहरुलाई कुन बेला के मन पर्छ ।
यसमा एक सर्वेक्षणपनि गराईएको थियो जस्मा ६८ प्रतिशत पुरुषहरुले भनेकि उनिहरु सेक्सका बारेमा जानकारी राख्ने महिलाहरुलाई मन पार्छन् । यसका साथै महिलाहरुलाई यस कुराको पनि जानकारी दिईदैछकि उनिहरु पुरुषहरलाई कण्डम प्रयोग गर्न कसरी पे्ररित गर्नुपर्छ ।
महिलाहरु बन्नेछन् सम्भोगका बस्तु सरकारले चलाएको यस अभियानको बिरोध गरिरहेका मानिसहरुको भनाई छकि यसले युवाहरुलाई सुखद जीवनका लागी नभएर बढीमा बढी सेक्सका भोगी बनाउन पे्ररित गरिरहेको छ । त्यसैपनि आजकलका युवाहरु सेक्सप्रति ज्यादा आकर्षित हुन्छन् र खुला किसिमले कण्डमको प्रयोगको जानकारी दिनुले उनिहरुको स्वास्थ्यमा खतरा आउन सक्छ । साथै सेक्सका विषयमा यसप्रकार खुलेर जानकारी दिनाले पुरुष महिलाहरुलाई केवल सम्भोगको बस्तु मात्र सम्झने छन् र यसले महिलाहरुको इज्जतमा धक्का पुग्नेछ । महिलाहरुका विरुद्ध बलात्कार र छेडछाडका घटनाहरुमा बुद्धि हुनसक्छ ।
Filed under: समचार « नेपाल पत्रकार महासंघको माग प्रधानमन्त्रीको राजिनामा छतबाट हामफालेर दूतावासको शरणमा »